MALUNGA US CMOAPI
Sikwimizi-mvelisoamachiza odibanisa iR & D kunye nemveliso.
I-CMOAPI ngumthengisi wezamayeza esiqhelo kunye nesivumelwano seR & D.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. eyasekwa ngo-2007, yinkampani yeshishini lobuchwephesha ebandakanyeka kuphando, ekuphuhliseni nasekuthengiseni izinto ezingamachiza.Imveliso zenkampani: I-Lorcaserin, phakathi kweLorcaserin, i-orlistat, i-Sesamol, i-tadalafil kunye naphakathi kwe-tadalafil, njl.
Umzi-mveliso wethu unezixhobo ezifanelekileyo zokufumana, iiseti ezingama-60 ze-HPLC, iiseti ezingama-20 zeekrisimitha zerhasi, i-LCMS, i-ELSD, i-ultraviolet kunye ne-spectrometer ebonakalayo, ukumanzisa ukomisa izixhobo kunye nezinye izixhobo eziphambili. Idlulile i-ISO14001, ISO9001 kunye nesatifikethi se-DMF ngokudibana kunye nokufunyanwa, kwaye inenkqubo epheleleyo yolawulo esemgangathweni.
Nika ingqalelo ukukhuselwa kwepropathi enengqondo
Inkampani yethu isebenzisa inani leengcali eziphezulu ezinemvelaphi yophando lwamazwe aphesheya, kwaye inamandla apheleleyo ezifundo zelebhu, ukuvavanywa komqhubi wenqwelomoya kunye nemveliso esebenzayo.
Kukho ogqirha abayi-11 kunye neenkosi ezingaphezu kwe-46, oososayensi, kunye neenjineli kwinkampani yethu.Iseti yemveliso ye-API igubungela indawo engaphezulu kwe-40 mu.Imveliso yezamayeza ye-GMP igubungela indawo engaphezulu kwe-160mu kwaye inendawo yokusebenzela yanamhlanje, indawo yolawulo kunye nezakhiwo zokufumana. , indawo yokuhlala, indawo yokuhlala engcolileyo, nokunye.
I-CMO kunye ne-API enye yokumisa inkonzo
Ukuqulunqwa kwesiko kunye nemvumelwano R&D
I-CMOAPI inokunikezela ngezi nkonzo zilandelayo, zonke zixhaswe yimigaqo-nkqubo yethu eluqilima kukhuseleko lwePropathi (i-IP), ukuqinisekisa ukuba iiprojekthi zisingathwa ngokungqongqo ngokuzithemba ngamaxesha onke.
Imveliso ezincinci nezincinci
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, i-CMOAPI ibonelela ngenkonzo ebekekileyo kunye neenkonzo zokwenza. Inqanaba lethu lenkonzo linokuqala ukusuka kwibatch encinci ye-milligram ukuya kwiitoni zeenkonzo ezinkulu zokuvelisa.
I-CMOAPI yokuFumanisa iziyobisi sisisombululo esisekwe kwilifu, esibonisa ulwazi esibonisa ulwazi lwenzululwazi kunye nedatha yokuveza unxibelelwano olwaziweyo nolfihliweyo olunokunceda ukwanda kokuvela kwesayensi.
Inkqubo R&D nophuhliso lwendlela entsha
Iqela lethu lophuhliso lwamakhemikhali, elinamaqela ososayensi kwi-50 kumazwe ethu, lidlula ukulindela kwiiprojekthi ezinzima. Ukusebenza kwii-laboratories zeseburhulumenteni ezixhotyiswe kwinkqubo yakutsha kunye nokuhlalutya.